Chemicals Organic, Furfural, Onye na-eme ka ikpo ọkụ - Shuiyuan New Energy Technology
Shenxian Shuiyuan New Energy Technology Co., Ltd. guzosie ike na 2000, emi odude ke Shandong n'ógbè, anyị bụ ndị na-emeputa factory pụrụ iche na-emepụta Dibenzoylmethane (DBM) na furfural. Dịka otu n'ime ụlọ ọrụ ọkachamara kachasị n'ụwa Dibenzoylmethane (DBM) nke nwere ikike kwa afọ 10,000 metric tọn, dịka otu n'ime ndị ọkachamara n'ikike kachasị na ụwa na-enwe ikike kwa afọ 30,000 metric tọn.
Kpọtụrụ anyị maka ndị ọzọ sample albums
Dị ka mkpa gị si dị, hazie gị ma nye gị amamihe
Anyị na-esi ọnwụ na ngwaahịa mma ke akpa itie na nditịm ahụ maka ngwaahịa mma nke ọ bụla usoro.
Anyị factory toro n'ime Premiya gbaara emeputa emeputa nke dibenzoylmethane na furfural.
Tọrọ ntọala na 2000, anyị bụ ndị nrụpụta nrụpụta nke pụrụ iche na-emepụta Dibenzoylmethane (DBM) na furfural.
Shenxian Shuiyuan New Energy Technology Co., Ltd. guzosie ike na 2000, emi odude ke Shandong n'ógbè, anyị bụ ndị na-emeputa factory pụrụ iche na-emepụta Dibenzoylmethane (DBM) na furfural.
152020 / Ọgọst
Onodu Chemical Chemical
Furfural chemical compound Furfural (C4H3O-CHO), a na-akpọkwa 2-furaldehyde, onye a maara nke ọma nke ezinụlọ furan na isi iyi nke ndị ọzọ dị mkpa na teknụzụ. Ọ bụ mmiri na-enweghị ntụ (ebe esi 161.7 Celsius C; ike ndọda 1.1598) ...
132020 / Ọgọst
Gịnị Bụ Egwuregwu? KC BRUNING Furfural bụ kemịkalụ sitere na ihe ọkụkụ nke emepụtara maka ebumnuche ụlọ ọrụ. Ebumnuche ya bu ihe ndi oru ugbo dika oat husks, bran, corncobs na sawdust. Offọdụ n'ime p ...
122020 / Ọgọst
Bagasse Osisi Fiber
Ihe omuma Melanoma bu nani 4% nke oria akpukpo aru ma obu n'etiti ndi mmadu kacha egbu egbu. Dacarbazine bụ ọgwụ ahọrọ maka ọgwụgwọ nke melanoma na Brazil site na usoro ahụike ọha na eze tumadi n'ihi ọnụ ala ya. Agbanyeghị, ọ bụ alkyl ...